फेसबुक, राष्ट्रियता र हामीहरू
मलार्इ थाहा छैन मेरो कुराले यहाँहरूलार्इ कत्तिको छुन्छ वा छुँदैन, तर मैले एक नेपाली नागिरक भएको हैसियतले आफूलार्इ लागेको कुरो अर्को एक नेपाली नागरिकसँग बिसाउन मात्र खोजेको हुँ । यसलार्इ अन्य अर्थमा बुझिदिनु हुने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ । हामीहरूले नेताहरूमा कहिल्यै राष्ट्रियताको छनक पाएनौं । र, उनीहरू राष्ट्रियताको मुद्दामा अति नै कमजोर रहेको आँकलन गर्दै आएका छौं । तर आज मलार्इ सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा एउटा प्रश्न गर्न मन लागेको छ (अझ विशेषतः फेसबुक संसारमा छाउनु भएका नेपाली मित्रहरूलार्इ) कि हामीमा राष्ट्रियता कति छ ? सायद मैले अब लेख्न लागेको कुराले राष्ट्रियता कसरी झल्कन्छ त ? भनेर यहाँको प्रश्न पनि रहला तर मलार्इ लागेको एउटै मात्र कुरा के हो भने साना कुराहरूमा हामीले आफ्नो परिचय लुकाएका हुन्छौं र त्यो हामीमा रहेको राष्ट्रियताको सानो झिल्को हो ।
मसँग विभिन्न १ दर्जन देशका व्यक्तिहरू फेसबुक संसारमा साथी छन् । उनीहरू मध्ये धेरैसँग मेरो प्रत्यक्ष कुराकानी पनि भएको छ । मैले उनीहरू अंग्रेजीमा अति नै कम बोलेको पाएँ । यदि आफ्ना देशका साथीहरूसँग छन र उनीहरूको भाषा नबुझ्ने कोही अर्को फरक देशको साथी उनीहरूसँग छ भने उनीहरू अंग्रेजीमा बोल्नै पर्ने कुरालार्इ अनिवार्यता ठान्दैनन् । उनीहरू मज्जासँग आफ्नै भाषामा बोल्दछन् र कोही एकजनालार्इ आफूहरू बीच भएको कुराकानीलार्इ अति संक्षेपमा ब्याख्या गर्न भन्दछन् । मैले पाएको छु, उनीहरू अधिकांश सबैले फेसबुकमा समेत आफ्नै भाषामा स्टाटस र कमेन्ट राख्ने गर्दछन् । यहाँहरूलार्इ मलार्इ शुरूमा लागे जस्तो उनीहरूको अंग्रेजी कमजोर भएर यसो गरेका हुन कि भन्ने लाग्ला तर कुरा त्यस्तो हैन । खासमा कुरो यो उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रियता र भाषाप्रतिको सम्मान हो । तल केही उदाहरणहरू छन्, हेर्नुस ।
चित्र नं. १ मेरो एक नर्वेजियन साथीको फेसबुक प्रोफाइल
चित्र नं. २) मेरो एक रसियन साथीको प्रोफाइल जहाँ उनले आफ्नो नाम समेत आफ्नै लिपीमा राखेकी छिन । र, उनको एक जना साथीको टिप्पणी रसियन मै देख्न सकिन्छ ।
चित्र नं.३) यिनी मेरा रूवान्डानिज फेसबुक मित्र हुन । यिनले प्रायः रूवान्डानिजमै आफ्नो भित्ते लेखन र टिप्पणीहरू लेख्ने गर्दछन ।
चित्र नं. ४) यिनी मेरी इन्डोनेशिय फेसबुक मित्र हुन । यिनी पनि सधैं इन्डोनेशियन मै लेख्ने गर्दछिन ।
मेरो भन्नुको तात्पर्य, यि माथी दिइएका उदाहरणमा मेरा मित्रहरूले गरे जस्तै हामीले पनि आफ्नै भाषामा फेसबुकमा नाम लेख्ने र भित्ते लेखन वा टिप्पणी गर्नै पर्दछ भन्ने होइन तर कम्तीमा पनि राम्रा अभ्यासहरूले हामीले पछ्याउन सक्यौं भने त्यसले हामीलार्इ केहि हानी गर्दैन भन्ने मात्र हो । तपाइँ लाग्ला देवानागिरी लिपीमा आफ्नो नाम राख्दा साथीहरूले फेसबुकमा साथी बनाउन खोज्दा नाम नभेटिएला भन्ने डर तर विचलित हुनु पर्ने कारण नै छैन । तल चित्रमा प्रस्तुत गरिए झैं यहाँले आफ्नो फेसबुक खाताको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ ।
सबभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक खाता खोलेर दायाँतिरको माथिल्लो भागमा रहेको Account मा क्लिक गर्नुस र Account setting मा जानुहोस । त्यसपछि Language मा गएर Primary language मा गइ सबभन्दा अन्तिम रहेको नेपाली भाषालार्इ छनौट गर्नुस । उदाहरणको लागि तलको चित्र हेर्नुस ।
अब यति गरिसके पछि यहाँले आफ्नो देखिने नाम नेपालीमा र साथीहरूले खोज्दा सजिलोको लागी त्यहि नाम अंग्रेजीमा राख्न पनि सक्नुहुनेछ । जसको लागि तलको चित्रलार्इ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस र त्यहाँ देखाए अनुरूप गर्नुस ।
पहिलो नाम र थर नेपालीमा लेख्नुस साथै साथीले अंग्रेजीमा यहाँको नाम लेखेर खोज्दा यहाँलार्इ नै भेटोस् भन्ने हेतूले Alternate Name को बक्समा अंग्रेजीमा नाम लेख्नुस साथै आफूले गरेको परिवर्तनलार्इ सुरक्षित गर्नुस ।
र, अब राष्ट्रियताको सानो अंश आफूमा सुरक्षित रहेको र सधैं नेपाली भएर बाँच्ने कोशिस गरिरहेको एक नेपाली नागरिकको पहिचान फेसबुक दुनियाँका साथीहरूमाझ बाड्नुस ।
यदि हजुरलार्इ नेपाली युनिकोडमा लेख्न आउँदैन भने तलको बक्समा रोमनमा टाइप गरी स्पेश हान्नु भयो भने कुनै पनि शब्द आफसेआंफ नेपाली युनिकोडमा बदलिन्छ । त्यसपछि त्यसलार्इ कपि गरि चाहेको स्थानमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
कृपया यहाँको प्रतिक्रिया मेरा लागि अक्सिजन हो भन्ने ठानी प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला । धन्यवाद ।
क्लोरिनको झोल, वैज्ञानिकहरू र मेरी बोइकी मुड्की
मेरो बाल्यकाल लगभग बोईसँगै बित्यो । त्यो चकचक गर्ने समय भएकाले मेरो चकचकसँग बोईलाई बेलाबेलामा झिझो लाग्नु स्वभाविक नै थियो । त्यसैले मैले अति नै अटेर गरेपछि बोईले मलाई भन्नुहुन्थ्यो - "अहिले गाडूँला मुड्की (मुड्कीले हान्छु) ।" तर अहँ कहिल्यै पनि एक झापड खानुपरेन । मुड्की नै खानु नपरेपछि मेरो चकचक थामिने कुरै थिएन, त्यसैले बोईले पनि मुड्की गाडूँला भन्न छाड्नुभएन अनि मैले चकचक गर्न । मेरी बोईले यस धरा छोडेको पनि यहि हिउँदमा बर्षदिन पुग्दैछ, तर बोईले भन्ने गरेको "अहिले गाडूँला मुड्की" मेरो मनमा गडिरहेको छ, अनि यसो सोच्छु, दुईचार पटक बोईले साँच्चिकै मुड्की गाड्नुभएको भए, मेरा चकचक उहिले पहिले नै खत्तम हुन्थे कि ? तर खासमा चकचक भन्ने जिनिस त्यत्तिकै खत्तम भएर गैहाल्ने कुरो हैन रहेछ । न त यो उमेर बढ्दै गएपछि आफै घट्दै र पछि निस्तेज नै हुने रहेछ । यसले खासमा उमेर बढ्दै गएर केश पाक्दै गएपनि आफ्नो स्वरूपमा अलिकति फेरिदै तरह तरहका रूपमा प्रकट हुँदै पो जाँदो रहेछ कि ? भन्ने निचोडमा पुगेको छु । यस्तै केहि केश पाक्नै थालेका मान्छेहरूको चकचक कोरोनको त्रास बढ्दै गएपछि अलिकति भि
फिनल्याण्ड झर्दा बित्तिकै के गर्ने होला ?
With friends at Helsinki airport विधार्थी प्रवेशाज्ञा (स्टुडेन्ड भिजा) मा फिनल्याण्ड आउँदै गरेकाहरूका लागि केहि उपयोगी जानकारीहरू बुँदागत रूपमा तल प्रस्तुत गरेको छु । 👶 के मैले नगदमा युरो लिएर आउनु उचित होला ? 👦फिनल्याण्डको चलनचल्तिको मुद्रा युरो भएकाले केहि सय युरो नगदमा लिएर आउनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा बैंक ड्राफ्ट नसाटिन्जेलसम्मको लागि दैनिक रूपमा उपभोगका सामाग्रीहरू किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । 👶 मोबाइल सिमको लागि के गर्नुपर्ला ? 👦 युरोपभर नै मोबाइल फोनको सीम पाउनु एकदमै सहज छ । विना कुने झन्झट चकलेट या हल्का पेय पदार्थ किने झैं बस्तुको रूपमा यहाँ मोबाइलको सीमकार्ड प्राप्त गर्न सकिन्छ । फिनल्याण्डको हकमा विमानस्थलमा झरेपछि विमानस्थलभित्रै R- Kioski नामको पसलमा सजिलै प्रिपेडसीम प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो सीम प्रायः दुइ खालको हुने गर्छन । एउटा नेटमात्र चलाउन मिल्ने सीम, अर्को फोन पनि गर्न मिल्ने फोन । अतः फोन पनि गर्न मिल्ने सीम लिनु ठीक होला । जसको मूल्य पाँचसात युरोभन्दा बढी पर्दैन । पोस्टपेड सीमको लागि फिनल्याण्डमा कम्तिमा २ बर्षदेखि बसेको हुनुपर्छ । अतः आफ्ना चिनजानका तपाइ
फिनल्याण्ड आउने सबभन्दा सजिलो तरिका
photo: Leverageedu उच्चशिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने सोच बनाउनु भएको छ भने, फिनल्याण्ड तपाइँका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्दछ । एक अध्ययनका अनुसार सन् २०१८ को अगस्त सत्रका लागि फिनल्याण्डका विभिन्न अप्लाइड साइन्सेज युनिभर्सिटीजमा भर्नाका लागि आवेदन भर्नेहरूमा EU/EEA बाहेक अरू देशहरूबाट आवेदन गर्नेहरू मध्य सबभन्दा धेरै संख्या नेपालबाट थियो । सन् २०१६ सम्म कुनै पनि देशको विद्यार्थीलाई फिनल्याण्डमा कलेज फि लाग्दैनथ्यो । तर हाल शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शुल्क नै तिर्नु परे पनि तुलनात्मक रूपमा यहाँका केही कलेजहरूले कम शुल्क लिने गरेको पाइन्छ । त्यसका अलावा एक वर्षको लागि तोकिएको क्रेडिट पूरा गरेको खण्डमा निश्चित प्रतिशत शुल्क मिनाहा हुने व्यवस्था पनि छ । अतः कलेज शुल्क अलिकति महँगो हुँदैमा आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति नहोला । विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया विद्यार्थी भिसाको लागि सबभन्दा पहिला यहाँको कुनै पनि कलेजमा भर्ना हुनुपर्ने हुन्छ । कलेज भर्ना वर्षमा २ पटक हुने गर्दछ । पहिलो अगस्त सत्रका लागि डिसेम्बर – जनवरीमा (१ महिनाभन्दा बढी नै) र दोस्रो जनवरीदेखि शुरू हुने सत्रका लागि सेप्टे
©️ नीराजन शिरीष